မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: June 2013
ေ ကောင်းမြတ်သူ (မူဝါဒရေးရာဌာန)
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်သူ များအားလုံး အခုတော့လည်း ရွေးကောက်ပွဲမှရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ် ကုန်ကြပြန် ပါပြီ။ ၂၀၁၀ ကိုသပိတ်မှောက်သူများအား ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို ရော ဘယ်လိုသဘော ထားမှာလဲဟု မေးခဲ့စဉ်က နောက် ၅ နှစ်ကာလ ကိုစဉ်းစားဖို.မလိုကြောင်း ဒီ၅ နှစ်အတွင်း အပြတ်ဖြတ်ရ မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်တင်ပြကြ၏။ ဘာကို အပြတ်ဖြတ် ရ မည်လည်းတော့ သဲကွဲစွာ မပြောနိုင်ကြပါ။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လက်မခံလို. ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ကြ မည်ဆိုလျှင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပ ဒေ တည်ရှိနေသရွေ.သပိတ်မှောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို.မှ သတိပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း၂၀၁၅ အထိတောင် မစောင့်နိုင်ကြ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ပါကြတော့သည်။ တိုင်းရေးပြည်ရေး နှင့်ပတ်သက်သော အရေးကြီးသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် နှစ်အနည်းငယ်ပင်ကြိုတင် မတွက်ဆနိုင် သော ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအားနည်းချက်သာလျှင်ဖြစ်၏။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ နှင့်တည်ဆဲ စစ်အစိုးရအားဖယ်ရှားပစ်နိုင်လောက်အောင် နိုင်ငံရေးလောကတွင် အားမရှိပါဟု ကျွန်ုပ်တို.က တင်ပြခဲ့သည်။ အမှန်တော့ ထိုသို. အင်အားမရှိခဲ့သည်မှာ ၁၉၉၀ ပြည်လွန် နှစ် များကထဲကဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးလော ကတွင် အဓိက လှုပ်ရှား တက်ကြွသူများအားလုံးတို. ကို ထောင် ချလိုက်ပြီဖြစ်၏။ ထိုကာလ ကတည်း ကမြန်မာပြည်နိုင်ငံရေး လော ကတွင် စစ်အာဏာ ရှင်အား ဖြုတ်ချနိုင်သော အင်အားမရှိခဲ့တော့ပါ။ ထိုသို့သော အခြေအနေကို သိသော် လည်း နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များက ပြည်သူကို တိုက်ပွဲခေါ်စေ၍ တိုက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေးကို ဆက်လက်စခန်း သွားခဲ့၏။ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး အတွက် ပြည်သူများ အပေါ်တွင်သာလျှင်မူတည်သည်ဟု ပြည်သူကို တာဝန် လွှဲချ ခဲ့ကြသည်။ ထိုသူများက ယခုကာက ကြပြန်တော့လည်း တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်သူ တွေ မှာ အဓိကတာဝန်ရှိသည်ဟု ဆိုလာကြပြန်ပါပြီ။ ခေါင်းဆောင်မှု အပိုင်း ၏ တာဝန်ယူမှုပြောက်ဆုံး လျှက် ရှိ၏။ အမှန်တော့ ထိုသူများအနေဖြင့် မိမိကိုယ် မိမိ ခေါင်းဆောင်ဟု မခံယူသင့်တော့ပါ။
အမှန်တော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုသည်မှာ ရိုးသားမှုကို ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်၏။ ဤနေရာတွင် ရိုးသားမှုဆို သည် မှာ အသိဥာဏ်နှင့်ယှဉ်သော ရိုးသားမှုကို သာဆိုလိုရင်းဖြစ်ပြီး မျက်ကမ်း မျိုးချစ် တို.၏ ဆင်ခြင်မဲ့ရိုးသား မှုမျိုးကိုဆိုလို သည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ပိုင်းတွင်လည်း ရိုးသားမှု မရှိသူတို.တွင့် မြင့်မားသော အသိဥာဏ်လည်း မရှိနိုင်တော့ပါ။ ရိုးသားမှုနှင့် အသိဥာဏ်မြင့်မားမှုတို့ သည်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်လျှက်ရှိပါ၏။ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးလောကတွင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟူ၍ မရှိသော်လည်း သက်ဆိုင်သူများက မိမိ တို.ကိုယ် မိမိတို. ထိုသို.ဟုတ်နေသယောင် ရပ်တည်နေကြ၏။ အမှန်တော့ ထိုခေါင်းဆောင်များမှာ မိမိတို. ထောင် သော သမဂ္ဂ တွင် မိမိတို.ကိုယ်တိုင် ခေါင်းဆောင်တက်လုပ် ခဲ့ကြသည်ကို ရိုးသားစွာဝန်ခံဖို.ပျက် ကွက် နေကြ ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ တရားဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ တစ်ရပ်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် ကြိုးပမ်း မှုမပြုပဲ ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းကို ဆယ်စုနှစ်များစွာ သိမ်းပိုက်ထားကြ၏။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် အမည် ခံ၍ ပြီးခဲ့သော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD အတွက် မဲဆွယ်တရားဟောခြင်းဖြင့် ခေါင်းဆောင်မှု ဆိုင် ရာ အခွင့်ရေးကို လွှဲမှားစွာ အသုံးချကြ၏။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုအတွက် မဲဆွယ် ပေးလိုလျှင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုသူများ ယခုကထဲက လူထွက်ဖို. သင့်ပါသည်။ နယ်လှည့်တရားဟော၍ ပြောစရာကုန်တော့ ၈၈ များကမ္ဘာလှည့် ၍ တရားဟောကြပြန်လေပြီ။
ပြည်ပ မှ ပေးသော ထောက်ပံမှုများအား တရားဝင် စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပဲ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် အမည်ခံ၍ သုံးစွဲနေခြင်းက မြန်မာပြည်ကျောင်းသားထု၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေ၏။ (Myanmar Peace Center) မှ ၈၈ ကျောင်းသားဆိုသူများ မိမိတို. အတွက် လခ မည်မျှရရှိနေသလဲဆိုတာ ကို ပြည်သူမှ အလွန် သိချင်နေ၏။ ပွင့်လင်းလူ.အဖွဲ. အစည်း ကို စာရင်းစစ်ဖို.အတွက် နိုင်ငံတော်စာရင်း စစ်ချုပ်တွင် တာဝန်ရှိမရှိ လွှတ်တော်တွင် တင်ပြဖို.လိုလေပြီ။ မြန်မာပြည်တွင်း ရှိ NGO အဖွဲ့ အစည်းများကို စာရင်း စစ် ဆေး နိုင်သော ဥပဒေ သစ်တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ဖို. အချိန်တန်ပြီဖြစ်၏။ သို.မဟုတ်ပါလျှင် အများအကျိုးသယ် ပိုးရင်း ချမ်းသာ သွားသူများ တစ်ဖြည်း ဖြည်းများပြား လာလေတော့မည်ဖြစ်၏။ ပြည်ပရောက် ၈၈ လူငယ် များ ပြည်ပအထောက်အပံ့များကို လွယ်ကူစွာလက်ခံသုံးစွဲခဲ့သဖြင့် စာရိတ္တ များပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ထိုယဉ် ကျေးမှု ကားယခုမြန်မာပြည်တွင်း သို့ ၀င်ရောက်နေရာယူလျှက်ရှိလေပြီ။ အများ အတွက် အလုပ်လုပ် ရင်း လခရနေသာလူငယ်တစ်ဦးသည် မိမိ၏ လုပ်ရပ်ထက် မိမိ၏ လခ ကိုသာ အဓိကထား သော ဆုံးဖြတ်ချက် များ ကိုသာချမှတ်ပေလိမ့်မည်ဖြစ်၏။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အရည်အခြင်း မပြည့်ဝ သော ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် စာရိတ္တ မပြည့်ဝသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကိုသာ ရရှိခဲ့၏။ ထိုသူများ ၏ အချို.မှာ စစ်အစိုးရ၏ ဖိအားကိုမခံနိုင်ပဲ အမတ်အဖြစ်မှနှုပ်ထွက်ခဲ့၏။ အချို.က NLD ခေါင်းဆောင်များ ကိုလက်ညိုးထောင်ခေါင်းငြိမ့်လုပ်၍ အမှန် တရားကိုပြောဖို.ပျက်ကွက်ကြ၏။ အချို.က ပြည်ပသို.ထွက်ခွာ၍ ပြည်ပအထောက်အပံ့များကို အလွှဲသုံးစား လုပ်ကြသည်။ အချို.အမတ်များကား ပြည်သူပေးသော တာဝန်ကိုမေ့၍ ပြည်ပတွင် အခြေချနေထိုင်ပြီး မိမိကိုယ်မိမိ အမတ်အဖြစ်ကြွားကောင်းနေဆဲဖြစ်၏။ ထိုအရည်အခြင်း မရှိသော အမတ်များက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ် အကောင်အထည် မပေါ်ခြင်းသည် စစ်အစိုးရမှာသာလျှင် တာဝန်ရှိ သည်ဟု ပုံချ လိုက်ပြီး မိမိတို.ညံ့ဖျင်း မှုကိုဖုန်းကွယ်လိုက်ကြ၏။ အမှန်တော့ ၎င်းတို့ညံ့ဖြင်းမှု ကြောင့်သာ စစ်အစိုးရမှ လုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်ရသွားခြင်းသာဖြစ်၏။ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း ဘာမှန်းမသိသော အမတ်များက အနိုင်ရလိုက်ပြန်၏။ ၂၀၁၅ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်ရလျှင် NLD မှ အချောင် သမားများ မိမိတို. အရည်အချင်းမပါပဲ ၀န်ကြီးဖြစ်ကြပေဦးမည်။ ဒေါ်စု သမ္မတ မဖြစ်သည့် တိုင် NLD မှ အများစု အနိုင်ရနိုင်သည်ဖြစ်၍ အနေ တတ်သူများ ၀န်ကြီးဖြစ်လာကြပေဦးမည်ဖြစ်၏။ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေး သည် အင်မတန်ကြောက်မက်ဖွယ် အခြေအနေတွင်ရှိ၏။ NLD သည် ဒေါ်စု ကို ဗဟိုပြု၍ တည်ဆောက် ထားသည်ဖြစ်၍ ဒေါ်စု နိုင်ငံရေးလောကမှ အနားယူလျှင် ပြိုကွဲပျက်စီးပေလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်တွင် နိုင်ငံရေးလောကတွင် ပြင်းထန်သော အားပြိုင်မှုများပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီး ပြည်သူများသည် နိုင်ငံရေးသမားများ နှင့် နိုင်ငံရေးလောက ကိုစိတ်ပျက် ၍ အချောင်သမားများ သာကြီးစိုးသော နိုင်ငံရေး လောကတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်၏။ ထိုသို.ဖြစ်လာခဲ့လျှင် တိုင်းပြည်အား ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကြာသည့်တိုင်အောင် အဖတ်ဆယ်၍ ရနိုင်မည်မဟုတ်တော့ချေ။
ပြီးခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲများ ၏ လွှတ်တော်အမတ်များကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ထိုအချိုးအစားတိုင်းရှိသော ညံ့ဖြင်းသည့် အမတ်များ ၂၀၁၅ တွင် အနိုင်ရဖို့ ရှိ၏။ ပြည်သူတွင်တော့ အပြစ်မရှိ၊ ပြည်သူကတော့ သူယုံကြည်ရသူကို မဲပေးမည်သာဖြစ်၏။ ၂၀၁၅ တွင် ဒေါ်စု ၏ အလုပ် သည် လူလည် လူရှုပ် ၀န်ကြီးများနှင့် အမတ်များကို ထိမ်းသိမ်းရ သော ကလေးထိန်း အလုပ်ကို သာဦးစားပေးလုပ် ကိုင်ရပေလိမ့်မည်ဖြစ်၏။ ဒေါ်စု အတွက် သမ္မတ အလုပ်ထက် ပိုအရေး ကြီးသော လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်၏။ ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေးမှာ လွယ်မယောင်နှင့် အင်မတန်ခက်သော စနစ်ဖြစ်၏။ ယခုချိန်ထိ ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေး ထွန်းကားနေသော ဥရောပတွင် ပြည်သူသည် မည်သူ.ကို မဲပေးရမလဲ ဆိုသည်မှာ ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်၏။ မဲရုံသို.မသွားသော ပြည်သူအရေအတွက်များပြားလာ၏။ အစိုးရအပေါ်အယုံအကြည်မရှိသော ပြည်သူတို.၏ ရာခိုင်နှုံးက တိုးတက်လာနေသည်။ ဥရောပ စီးပွားပျက်ကပ်သည် ဥရောပ အစိုးရများ၏ ညံ့ဖြင်းမှုနှင့် လိမ်လည်မှုများကြောင့် အဓိကဖြစ်၏။ အထူးသဖြင့် လက်ဝဲ ယိမ်းပါတီများက ပြည်သူအတွက် ဘာလုပ်ပေးမည် ညာလုပ်ပေးမည်ဟု မဲဆွယ် ပြီး ပြည်သူအကြိုက်ဖန်တီး၍ မဲအနိုင်ရရှိ ရေးကြိုးပမ်းကြ၏။ သူတို.အနိုင်ရတော့ ပြည်သူ.ဘဏ္ဍာဖြင့် ၎င်း တို.၏ ရွေးကောက်ပွဲ ဂတိက၀တ်များကို အကောင်အထည် ဖေါ်ပေးကြသည်။ ဘတ်ဂျက်မရှိတော့ ချေးငှား၍ သုံးလိုက်၏။ နောက်ဆုံးတော့ အကြွေးတင် ပြန်မဆပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး ဥရောပ စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုက်သည်။
မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲဖြစ်သောကြောင့် ကြွေးလျှော်သူများ ကလည်းလျှော်ကြသည်။ ငွေချေးသူများကလည်း မရှားလှ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖြင်းလျှင် နောင် ဆယ်စုနှစ် တစ်စုနှစ်စုအတွင်း ကြွေးများက ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးပြန် ဖြစ်ပြီး ချေးမည့် ငှားမည့် သူမရှိဘ၀ ပြန်ရောက်နိုင်သည်။ ယခုပင်လျှင် မြန်မာပြည်သို.ချေးနေသောချေးငွေ များက အရှုံးပေါ်နိုင်သော လုပ်ငန်းများတွင် အများစုဖြစ်နေ၏။ နိုင်ငံကြီးများက အလွန်လိမ်မာပါးနပ်၏။ အရှုံးပေါ်နိုင်သောလုပ်ငန်း များအတွက် ငွေထုပ်ချေးပြီး အစိုးရနှင့် ရင်းနှီးအောင်လုပ်၍ အမြတ်များသောလုပ်ငန်း များအတွက်တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုကို ပြုလုပ် ကြ၏။ လမ်းတံတားလုပ်ငန်းအတွက် ငွေထုတ်ချေး၍ ဘိလပ်မြေစက်ရုံလာဆောက်သော ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုမျိုးဖြစ်၏။ နောင် ၁၀ နှစ်ကျော်ခန့််ကြာလျှင် ယခု အငြင်းပွားနေကြသော လူကြီးများ နိုင်ငံရေးလောကထဲတွင် ရှိနိုင်မည် မဟုတ် တော့။ ထိုလူကြီးများသည် ၎င်း တို့၏ အကြိတ်အခဲများအား လူငယ်များသို့လက်ဆင့်ကမ်းဖို.သာလျှင်လုပ်ဆောင်နေဟန် ရှိ၏ ။ လူငယ်အများစု မှာ သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတို.၏လေသံနှင့် တစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေကြသည်။ လူငယ်များထံမှ အကြိတ် အခဲမကင်းသည့် နိုင်ငံရေး အယူအဆများသာ ကြားသိနေရ၏။ နိုင်ငံရေးလုပ်လျှင် ကိုယ်ကျိုးစွန်.ရ သော်လည်း နိုင်ငံရေးလုပ် ခြင်းမှ အကျိုးစီးပွားရနေခြင်းက အန္တရယ်ရှိ၏။ ငွေကြေးကိုသာလျှင် အကျိုးစီးပွားဟုခေါ်ဆိုခြင်းမဟုတ် ကျော်ကြားမှု ရရှိ၍ ထိုကြော်ကြားမှုဖြင့် သာယာနေခြင်းသည်လည်း အကျိုးစီးပွားတစ်ခုသာလျှင်ဖြစ်၏။ ရိုးသားစွာ နိုင်ငံရေးလုပ်ရမည်ဖြစ်သော် လည်း ခါတော်မှီ နိုင်ငံရေးအယူအဆများကို အသံကောင်းဟစ်၍ လိမ်လည်နေကြ၏။ အသိဥာဏ်မြင့်မား သူများ (သို့) နိုင်ငံရေးလေ့လာလိုက်စားသူများသာ ဦးဆောင်မှု ပြုလုပ်သင့်သော်လည်း တစ်နှစ်လုံးနေ၍ စာတစ်အုပ်မဖတ် သူများက ခါတော်မှီ သံယောင်လိုက်၍ လူတွင်ကျယ်ဖြစ်နေ၏။ ပညာတတ်များ အမှန်အတိုင်းပြောဖို. အချိန်ရောက်လေပြီ။
ကျော်ကြား သူများက မိမိတို.ကျော်ကြားမှုကိုသာ ထိမ်းသိမ်းထားလိုကြ၏။ အာဏာရှိသူများက အာဏာကို လက်မလွတ်ချင်ကြ။ ချမ်း သာသူများက ဆင်းရဲရ မည်ဆိုလျှင် ဘာမဆိုလုပ်ဖို.အဆင်သင့်ရှိ၏။ ပညာရှင်တို.၏ သဘာဝက ဘာသိဖာသာနေတတ်၏။ ပြည်သူ၏ သဘာဝက ကြော်ငြာကောင်းလျှင် စားသုံးတတ်၏။ လူလည်လူရှုပ်များက အလွန်နေရာယူတတ်သည်။ ညံ့ဖြင်း သောခေါင်းဆောင်များက နောက်လိုက်ကောင်းများကို မွေးမထုတ်နိုင်။ အမှန်တရား ကိုတင်ပြမည်သူများများရှိလေ ကောင်းလေသာလျှင်ဖြစ်ပေမည်။ ထိုအမှန်တရားကိုတင်ပြမည့်သူသည် မူအားဖြင့် တော့မီဒီယာများဖြစ်၏။ လက်တွေ.အား ဖြင့်တော့ မီဒီယာများလည်း ခါတော်မှီမူဝါဒ များထဲမှရုန်းမထွက်နိုင်ဖြစ်၍ နေလေပြီ။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 6:43 PM0comments Links to this post